बचत सेवा - Gharelu Laghubitta
पेवा बचत : संस्थाको ग्राहक सदस्यहरूले आ–आफ्नो नाममा ऐच्छिक रूपमा गृहिणी/पेवा बचत खाता खोली बचत भएको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यस खातामा ग्राहक सदस्यहरूले प्रत्येक मासिक बैठकमा न्युन्तम रु. १० र अधिकतम केन्द्र बैठकमा रु ५,०००/ र शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा आई रु. ५००,०००/ सम्म जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी जम्मा हुने रकम आफूलाई समस्या पर्दा तथा आकस्मिक आवश्यक्ता पुरा गर्न कुनै सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार रु. १००/– न्युनतम ब्यालेन्स राखी झिक्न पाउने छन् ।
मासिक क्रियाशील बचत : समूहका सदस्यहरूले समूह मान्यता पाइसकेपछि बस्ने हरेक बैठकमा तोकिएको रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो रकम न्यून्तम रु.१०० को दरले बैठक पिच्छे जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो बचत खातामा सदस्यले रु. ५,०००/ नहुञ्जेसम्म बचत गरिराख्नु पर्ने हुन्छ । सो भन्दा बढी पछि आवश्यक्तानुसार खातामा न्यून्तम रु. १,५००/ सम्म मौजदात बाँकी राखी सुत्केरी, बिरामी, शैक्षिक शुल्क र अन्य सामाजिक कार्यमा त्यसभन्दा बढी रकम झिक्न पाइनेछ । यो रकम मासिक बैठक वा शाखा/उपशाखा कार्यालयमा गई झिक्न सकिनेछ ।
आपतकालिन बचत : साधारण ऋण लिनुअघि कार्यालयमा ऋण लिने सदस्यले लिने ऋणको ५ प्रतिशत बरावरको रकम यस बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । जीवन बचत खाता खोल्ने ग्राहक सदस्यले कर्जा लिंदा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतले हुने रकम आकस्मिक बचतमा जम्मा गर्नु पर्दैन । यो बचत आकस्मिक रूपमा हुने प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका कारण हुने दुर्घटना जस्तैः आगलागी, चट्याङ्, बाढी पहिरो, भुकम्प, सर्पको टोकाइ, जंगली जनावरको आक्रमण आदिमा परी मानवीय क्षती पुगेको अवस्थामा यो बचतमा रहेका रकम उपयोग गर्न सकिन्छ । उपरोक्त घटनामा पर्दा मानवीय संवेदनालाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित शाखा तथा उपशाखाका कर्मचारीले तत्कालै बचत फित्र्ता फारममा सही गराई पासबुकमा भरेर दिन सक्नेछ ।
केन्द्र बचत : अनिवार्य समूह तालिम दिइदा प्रत्येक सदस्यहरूबाट प्रतिदिनको रु. ५/ तालिम शुल्क वापत रकम जम्मा गराउनुपर्ने छ । यसअनुसार ५ दिन तालिमको रु. २५/ पूर्व समूह मान्यता परीक्षा गरेको दिनको रु. ५/ र समूह मान्यता परीक्षा गरेको दिनको रु. ५/ गरी प्रति सदस्य रु. ३५/ र प्रति समूह रु. १७५/ अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्न लगाई जम्मा भएको रकमलाई कर्जा वितरण गरेको दिन सम्बन्धित केन्द्रको नाममा केन्द्र बचतको खाता खोली जम्मा गरी दिनुपर्ने छ ।
जीवन साहारा बचत : ग्राहक सदस्यले आफू समूह तथा केन्द्र छोड्दा यस बचतमा जम्मा गरेको रकम झिकी आफ्नो समस्या टार्न तथा आफ्नो घरपरिवारको केही व्यवस्थाको लागि पुँजी कायम गर्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले यो बचतको व्यवस्था गरिएको हो । ग्राहक सदस्यहरूलाई भविष्यमा आफ्नो घरपरिवारको लागि पहिलेदेखि खर्चको व्यवस्था नगर्दा एक्कासी पर्नजाने आर्थिक भारबाट बचाउन समयमै सो व्यवस्थाका लागि कुनै निश्चित रकम प्रत्येक केन्द्र बैठकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो बचत ९ वा १४ वर्षसम्म नियमित रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसरी ९ वर्ष अवधिका लागि गरेको रकम ९ वर्ष पुगेपछि निजले जम्मा गरेको अन्तिम बांकी रकममा ५० प्रतिशले हुने रकम थप गरी र १४ वर्ष अवधिको लागि जम्मा गरेको रकम १४ वर्ष पुगेपछि निजले जम्मा गरेको अन्तिम बांकी रकममा शतप्रतिशत थप गरी एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ ।
सिर्जनशील बालयुवा बचत : संस्था तथा समूहमा आवद्धित ग्राहक सदस्यका छोरा छोरीहरूले सृजनशील बाल युवा बचत गर्न सक्ने छन् । यो बचत गर्न चाहने इच्छुक बालबालिका वा युवायुवतिले समूह बनाई मासिक रूपमा बचत गर्न सक्नेछन् । यो बचत गर्नका लागि वनेको समूहका सदस्यहरू मध्येबाट एक जना मेनेजर र एक जना सहायक मेनेजर छानिने छन् । यी दुई जनाले नै आफ्ना समूहका सदस्यहरूको बचत संकलन गरी संस्थामा आफै वा आफ्ना परिवारका सदस्य बसेको समूह वा संस्थाका कर्मचारी मार्फत् जम्मा गर्न पठाउनु पर्नेछ ।